I-lever eyodwa yokuhlamba ityhubhu ye-nickel
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / WOWOW Igumbi lokuhlambela Isitya sempompo Ibhulashi yeNickel
Wowow Bathroom Vessel Faucets Bronze Nickel
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 18 amanqaku umthengi
(18 ncomo ngumthengi)
Ukuqokelelwa kwetephu kuzisa ubume obungapheliyo obuchazwe ngeendlela ezintsha ezintsha kwimimandla eyahlukeneyo yemisebenzi yegumbi lokuhlambela. Thenga iimpompo zangasese ezibekwe eludongeni kwigumbi lokugqibela ezininzi ezahlukeneyo.
2321501 imiyalelo yokufaka
Isitya sokuhlambela isitampu sokuhlambela isitya esinye 2321501
Le mpompo yokuhlamba yangasese inika uhlaziyo lwesitayile kwindawo yakho yokuhlambela. Yenzelwe ngononophelo ngobuhle, ukanti ngokujija okuchuliweyo. Isiphatho esisodwa semibhobho yangasese yokuphatha i-WOWOW yenzelwe i-curve-curve, ngokudibeneyo kunye nokugqitywa kweklasikhi yokugqitywa kweklasikhi. Ayisiyonto le mpompo yesiphatho sokuhlamba yangasese kukujonga kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuba yenye yezona zinto zibalulekileyo kwindawo yakho entsha yokuhombisa.
Uphando lubonakalisile ukuba iipompo zokuhlambela zezona ndawo kugxilwe kuzo nakweyiphi na indlu yangasese. Oko kuthetha ukuba ingqalelo yakhe nabani na itsalwa ngokuzenzekelayo kwiipompo zangasese. Uninzi lweepompo zokuhlambela yenye yezinto ezincinci kwinto yakho yokuhombisa yangasese. Ukanti banefuthe elikhulu ekubonakaleni kobukhulu bayo. Ngokuqinisekileyo, unokongeza ukubamba kobuhle nakweyiphi na indawo yokuhlambela ngombhobho wokuhlambela ngesiphatho esinye seWOWOW. Abaqulunqi be-WOWOW baziqonde ngokucacileyo iimpembelelo zeepompo zangasese, kwaye ngenxa yoko bayile iipompo zangasese ezinokwenza umahluko nakweyiphi na imihombiso.
Yila igumbi lokuhlambela isitephu esinye
Ufuna ukuba igumbi lakho lokuhlambela libe nesitayile kunye nokusebenza ngaxeshanye. Ngenxa yoko, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwepheyile yokuhlambela oya kulukhetha. Njengoko kukho iintlobo ezahlukeneyo zeefenitshala zokuhlamba, kufuneka uqale ujonge indawo ekhoyo, nento oyithandayo ngokubhekisele kulawulo lobushushu bamanzi. Ngaba ukhetha ukulawula ubushushu bamanzi kunye nomthamo ngezibambo ezi-2 okanye enye nje? Xa ukhetha isiphatho esinye kuphela, igumbi lokuhlambela isiphatho esinye se-WOWOW inokuba lelo faucet igumbi lokuhlambela ulikhangela!
Esi sithunzana sokuhlambela sasiphatho esinye senziwe ukusuka kumbono wesitayile kunye nokusebenza. Isiphatho esinye esijikeleziweyo sibekwe ngokufanelekileyo ecaleni kwecala lokuhlambela. Igumbi lokuhlambela le-WOWOW isitofu esinye sisebenza kakuhle. Umthamo wamanzi kunye neqondo lokushisa linokulawulwa ngokukhuselekileyo ngesandla. Isiphatho esinye ngaphandle kwamathandabuzo kulula ukubamba nokusebenza. Unokusebenzisa nje ukuphatha isithunzela segumbi lokuhlambela ngesandla esinye ngokutsala kude. Ngale ndlela ukuhamba kwamanzi okuguqukayo kusebenze. Ngokujikeleza isiphatho esinye unokunyusa ubushushu bamanzi ngokulula nangokutyibilikayo. Ukuqulunqwa kokujikajikajikajika kathathu kwe-US ngokuqinisekileyo kukhethekile. Oku kwenza ukuba igumbi lokuhlambela liphume ngakumbi nangaphezulu, ngelixa uxhamla kuyo yonke imisebenzi ekubonelela ngayo.
Umgangatho ophezulu wangaphantsi wokuphelisa isitovu esinye isibambo
Indawo yokuhlambela ngombhobho ka-WOWOW ngesiphatho esinye senziwe ngobhedu olukhulu kwaye ukugqitywa kwayo kwe-nickel kwahlanjwa ngesandla kwaye kwalungiswa. Ukugqitywa kwayo, i-WOWOW isebenzisa ubuchwephesha bobuchwephesha ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nokuqina. Ngenxa yokuba itephu yokuhlambela ngombhobho omnye we-WOWOW yenziwe ngobhedu obuqinileyo, le faucet yokuhlambela ikwazisa ukumelana nokufuma kwaye ngenxa yoko umhlwa. Ngaphandle kwento, i-WOWOW ibonelela ngesiqinisekiso seminyaka emi-3 kwisitya sayo sokuhlambela esisibambo esinye. Ubungqina bokuba i-WOWOW iyakholelwa kumgangatho wemveliso yayo kwaye ithatha uxanduva ngokusebenza kwayo unyaka wonke.
Njengoko uyilo lwale faucet isiphatho esinye sahlukile kwaye sinelungelo elilodwa lomenzi, kwaye nezinye izinto ezisebenzayo zahlukile. Isixhobo esigcina amanzi esomeleleyo ngokomzekelo. Ukusebenza okuphezulu kweNeoperl Aerator yeli gumbi lokuhlambela isiphatho esinye sibonisa iimpawu zokuhamba kwamanzi kunye nokuhamba kwamanzi. Ke ngoko awuzukufumana nakuphina ukusasazeka kwamanzi. Ngaphandle koko konga ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 ekusebenziseni kwamanzi. Ngokuqinisekileyo oku uya kukuqaphela kwityala lakho lamanzi. I-aerator ingashenxiswa ngokulula ngesixhobo (esifakiweyo) sesixhobo se-aerator. Ngale ndlela unokuyicoca ngokulula emva koko, ukuze uqiniseke ngamava afanelekileyo okwenza iminyaka.
Isicoci sefestile yokuhlambela esisebenza ngokulula
Okokuqala, ukugqitywa kwe-nickel egqityiweyo kunika ukubukeka okubonakalayo kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela. Ngaphandle koko, ukugqitywa komgangatho ophezulu kwakhona kuxhathisa amabala amanzi, ukuphela kunye neendawo zeminwe. Ke ngoko kulula ukuyigcina kwaye icocekile. Ungasusa nje ngobunono konke okushiyekileyo ngendwangu emanzi ukwenza igumbi lakho lokuhlambela liphathe isibane sibe mtsha kwakhona. Ukucoca isitofu sakho sokuhlambela rhoqo kunye nesiqinisekiso sokuphila ixesha elide. Ngale ndlela intsalela enzima ayinakho ukutshintsha okunamathela kwigumbi lokuhlambela lakho. Ngokukodwa, intsalela efana netshokhole inokuchaphazela isitofu sakho sokuhlambela, ukuba ayicocwanga rhoqo. I-WOWOW yenza kube lula, ukuze wenze oku ngaphandle kokuzama.
Ivalam ye-ceramic yombhobho wokuhlambela umbhobho owodwa unikezela nge-100% yokusebenza okungahambi. Kwaye ngaphandle kokunciphisa ukutyibilika kokusebenza. Le khatriji yodongwe yodidi oluphezulu yavavanywa ngemijikelo yamanzi engaphezulu kwama-500,000. Kwaye i-WOWOW yokuhlambela ngesibambo sokuphatha isibambo esinye sasisebenza ngokulula okufanayo. Ewe kunjalo, i-drip-fee kwaye ayivuzi. Khawufane ucinge ukuba ipompo yangasese ayinakusetyenziswa ngaphezu kwamawaka ayi-10,000 XNUMX ngonyaka. Oko kuthetha ukuba ngombhobho wokuhlambela ngesiphatho esinye se-WOWOW uthenge ithumbu lokuhlambela ubomi. Le faucet yodwa yokuhlambela yangasese idlula yonke imigangatho yemizi-mveliso!
Yenza-ngokwakho-igumbi lokuhlambela isitephu esinye
Isiphatho esinye sokuphatha isitya esinye kulula ukuba uzifake ngokwakho. Awuyi kudinga nayiphi na ipayipi yeendleko! Ke ngoko unokugcina kwiindleko zokufaka kakhulu. Le faucet yokuya kuzenzela ngokwakho ikhutshwa neseti epheleleyo yezixhobo kunye nezixhobo zokufaka. Oku kubandakanya ipleyiti yentsimbi yentsimbi, isicoci samanzi se-intshi Tucai esinomgangatho oqinisekisiweyo, iigloves zokufaka, isixhobo sokususa i-aerator, kunye nokunye.
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, i-WOWOW inentembelo kakhulu ngomgangatho wegumbi lokuhlambela layo. Ke ngoko i-WOWOW ikunika ixesha lokuqinisekisa iminyaka emithathu. Ukuba igumbi lokuhlambela isitovu sakho esinye besingayi kusebenza njengoko kufanelekile, uya kubonelelwa ngephepha elitsha lokuhlambela isitayile esinye sokucoca esakho. Kwaye ngaphandle koko, i-WOWOW inikezela ngesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-3. Ukuba awungekhe uchukumiseke lixabiso lemali I-WOWOW ekunika yona, uya kuyifumana
Fumana imbuyekezo epheleleyo ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo, kwaye ngaphandle kwemibuzo ebuzwe. Ilula njengaleyo!
Izibonelelo zomsebenzi wokuphelisa isitofu sokuhlambela kwindawo enye ngokungabalulekanga:
 Nika into eyonwabisayo kuyo nayiphi na igumbi lokuhlambela
 Uyilo olunqatyisiweyo olunamaphepha amathathu aseMelika
 I-nickel emileyo ebonakalayo
 Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu
 Umnxibelelanisi we-lever ophathekayo
Gcina amanzi ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 kwisibhengezo esinezinto ezintsha
 Kulula ukucoca kwaye kulula ukuyigcina
Ithuba lewaranti yeminyaka emi-3
I-SKU: 2321501 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo tags: 1 Bamba, 1 Umngxunya, igumbi lokuhlambela
16.2 x 9.1 x 6 intshi
Ngesanti kubunzulu baphantsi
Inani lePakethe yobungakanani
Intambo entle kakhulu yetheyipu, uMgangatho oGciniweyo kunye nokufakwa kwe-esy
Le mveliso inembonakalo eyahlukileyo ukongeza ekubeni isiphatho esinye, yiyo loo nto ndithenge. Ndoneliseke kakhulu ngumgangatho kunye nokugqitywa kwemveliso kwaye ndonwabile ngokuthenga kwam.
Ndithenge le nto ukubuyisela isiphatho esi-2 esele sikhona, ithumbu elinemingxunya emi-3 kwigumbi lam lokuhlambela. Nangona umngxunya ongumbindi kwinto engento wawumncinci kakhulu kwaye wawudinga ukukhutshwa ukuze kulungiselelwe le faucet intsha, ipleyiti yobuso ebandakanyiweyo nale faucet yagquma imingxunya emi-3.
Le faucet isebenzisa umgangatho, iintsimbi zanamhlanje ezingenasici kunye nezinto zobhedu. Ukufakwa kweziko kunomsesane wobhedu wokukhusela itompu kokungamampunge kunye nezikere ezi-2 ngapha nangapha kweringi ukuqinisekisa ukuqina. Oku kubonakala ngathi ziimpompo ezintle ezifakayo kwezi ntsuku, endiyibulelayo ngokunikwa indlela ekunzima ngayo ukufikelela kwi-torque efanelekileyo kwiindawo ezixineneyo ngaphandle kwezikere ezi-2.
Isiqwenga sedreyini asinyukanga sinyibilikise ngokupheleleyo kwisinki yam, kodwa ndiyayithanda into yokuba kukutsala-ukuvala idreyini kunokuba ube nebha oyitsalayo. Umahluko kumbhobho omnyama kunye nesinki emhlophe intle. Abanye abantu banokuba nexhala lokuba idreyini yiplastiki, ke kufanelekile ukuba uqaphele. Kuya kufuneka ndibone ukuba ime njani ngokuhamba kwexesha.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ndenze olu hlobo lokufaka imibhobho elula ngaphambili. Ndiyi-DIY'er ephathekayo, kodwa andiyiyo i-plumber enamava. Izixhobo kunye nezinto endizisebenzisileyo zibandakanya isitshixo, izitshixo zesitishi, iscrewdriver, ibhakethi, itawuli, i-plumbers putty, iteyiphu yeteyiponi, isixhobo seRigid EZ Change faucet (kunye ne-1/1 ″ hole hole + drill ukuguqula into engento).
Ndichukumisekile yile faucet. Yakhiwe kakuhle, inzima, ijongeka intle kwaye isebenza kakuhle. Ukufakwa yayiyimpepho, kodwa imigca yokubonelela yayimfutshane kancinci. Akukho maxhala. Umvelisi wade wanikezela ngeTapeon tape. Ekuphela kwento endinqwenela ukuba le yayiyindidi ethile yeplastikhi yesplac phantsi kwepleyiti enyukayo ukuze iqiniswe kancinci. Ndiqinisekile ukuba ndinokuyenza into. Konke kuzo zonke, le yinto enye yombhobho.
Njengoko abanye bebonisile, ukuqinisa itepu kunomdla wokugoba ipleyiti yomgangatho. Isisombululo sam koku yayikukusebenzisa amakhonkco o ajikeleze umkhono onemisonto ohamba ngee hoses. Iiringi ezi-o kufuneka zibenkulu ngokwaneleyo ukuba zilingane kuloo mkhono kodwa zincinci ngokwaneleyo ukuba zinokulingana kwipleyiti yomgangatho. Ndibeke ezimbalwa kwezi ukuze ukuphakama kwesitaki kube mde kancinci kunendawo yokuphakama kweplate. Amakhonkco o anebhonasi eyongeziweyo kuba inceda iziko lombhobho kunye nomgangatho wepleyiti. Ngale ndlela, ndakwazi ukuqinisa umbhobho phantsi ukuze ungahambi kwaye isitya asiqubeki.
Ndiyithanda kakhulu le faucet. Imigca emihle kunye nokulula kuyamangalisa. Yenziwe kakuhle, ayitshiphu nangayiphi na indlela. Onke amalungu abonakala ngokulula kwaye kwakulula ukufaka. Andingombumbi kwaye ndinamava amancinci, ndiyathanda nje ukuzama izinto ezintsha kwaye ndakwazi ukuyibeka kunye kwaye ndisebenza ngaphakathi kweyure.
Ukuhamba kuphantse kwaba laminar kwaye kunokubeka itoni yamanzi ukuba uyakuvumela.
Ndonwabile ukuba nale nto kwindawo yethu yokuhlambela iindwendwe kwaye sele ndizifumene izincomo!
Ixabiso elingakholekiyo. Ndithelekise ezinye zeepompo ezilahla amaxesha ama-2 okanye ama-3 kangako kwaye azithelekisi. Le nto yinto eqinileyo yesinyithi! Uvakalelo luphawu olusulungekileyo. Ndingumfana ongatshatanga oneminyaka ubudala. Akufanelekanga ukuba ndonwabe malunga nendawo yokuhlambela kodwa ndiyayithanda!
Ndiyifakile oku kwigumbi lokuhlambela elidala lama-60s elinezinto zokuqala. Kwafuneka ndenze banzi umngxuma osembindini ngokusila. Kwakufuneka ndenze okufanayo nakukhupha amanzi. Khange ndisebenzise idreyini eza nayo, ndathenga umsebenzi oqinileyo wentsimbi. Oku kuguqule igumbi lam lokuhlambela kwaye kwalenza laziva liphezulu, nokuba kukuhlamba izandla nje, ebesikade sisenza kakhulu mva nje.
Ifowusi yeWowow ikumgangatho ophezulu kakhulu kwaye uyilo luhle kakhulu ngexabiso. Ukugqitywa kwe-nickel kubukeka kakuhle kwi-satin kwaye kulula ukuyigcina icocekile kwaye ingenabala. Ulawulo lwesandla olulula kulula kwaye lunomdla ekusebenziseni. Iza nepleyiti yokugubungela ukuba iyafuneka ukuguqula ukusuka kwimingxunya emithathu ukuya kwenye, kodwa ndiyinyuse ngokuthe ngqo ngaphandle kwepleyiti kwindawo yam ephezulu. Kwakulula ukuyifaka, kodwa yazi ukuba imigca yesondlo imalunga kuphela neenyawo ubude kwaye unokufuna ukongezwa kwemigca yamanzi ukufikelela kwiivelufa zakho zokufaka. Le yimveliso entle kwaye inexabiso elikhulu ngexabiso.
Ngokuqinisekileyo iyamangalisa! Umtywini weplanga wethu ubuze ukuba siyifumene phi itepu kuba ibukumgangatho olungileyo kwaye wayefuna ukuyifumana ngokwakhe. Ndingacebisa kakhulu. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, intle kakhulu.
Ndiyaneliseka kakhulu ngempompo! Uyilo lulula kwaye luhle, olwenza ukuba igumbi lokuhlambela likhangeleke! Olona ncedo lukhulu kukuba ukufakela kulula kakhulu! Ukunyaniseka, ndicinga ukuba kuya kuthatha ixesha ukuyifaka, kodwa imiyalelo icacile kwaye kulula ukuyiqonda. Ndizele indumiso ngokubonakala kwale faucet. Bendihlala ndinompompo osemgangathweni waseMelika kwigumbi lokuhlambela elingaphezulu, kodwa khange ibonakale intle kakhulu. Ndiyathanda ukubonakala kwale faucet, kwaye ndiyayithanda unyango lomphezulu!
I-10 ngaphandle kwe-10! Wathenga AMATHATHU kwaye ubathanda ngokupheleleyo! Umgangatho olungileyo kwaye ixabiso liyabiwa.
Itepu encinci iyatyeba okanye inzima kunokuba bendithanda!
Ndiyasithanda isitayile kunye nendlela esebenza ngayo itompu, izinto ezilungileyo. Intle kakhulu
Ibhobho yokuqala yokuhlambela endakha ndayithenga! Kuyamangalisa! Yenziwe kakuhle kwaye yomelele! Sleek kunye nesitopu esinkini kulungile. Ndi Absolutley uthando!
Ndinesikhululo sovavanyo esimiselwe ukuphonononga iimpompo.
Ndizakuzama ukophula izinto kangangoko ndinakho ngokomgangatho wemveliso kunye nobunzima bokufakwa.
Kwinqanaba le-1-10, ndingathi le faucet iyi-7/10 ukuya kubunzima bokufaka.
Gcina ukhumbula ukuba inokwahluka ngendlela isinki yakho kunye nekhabhathi eyilelwe ngayo.
Le faucet ithile ilungile.
Ukugqitywa okumnyama kubonakala kulungile. Ngokubanzi le faucet ibonakala yomelele kakhulu. Ndiyathanda ukuba ukugqitywa kungangcoliseki kangako ngenxa yokujonga kwe-matte. Ayifuni ukusulwa phantsi ngamaxesha athile njenge chrome ukugcina ukukhanya.
Isibambo esinye senza kube lula ukukhetha ubushushu bamanzi. Ivaluva yokuxuba isebenza kakuhle, njengoko kufanelekile.
Le tephu kulula ukuyisebenzisa kwaye ihamba kakuhle ngaphandle kwemicimbi.
Inyani yokuba ujikelezo lwedigri engama-360 iyahambelana kwaye kukudibanisa kuba unako ukuyinyusa nangona ufuna njalo kwaye isaza kuhamba apho ufuna khona. Kuza nepleyiti yomgangatho. Ungayigubungela loo mingxunya ingasetyenziswanga kwisinki sakho.
Unesakhono sokudiliza intloko, ngokuqinisekileyo yokudibanisa ngokunjalo. Iindlela zokutshiza ezininzi azifani nezinye izinto ezincipha phantsi koompompo. Isiseko apho intloko iphuma khona siyilelwe kakuhle ukuze singonakalisi ithumbu ngokuhamba kwexesha njengoko uyisebenzisa.
Uyilo oluhle kunye nokulingana kwaye ugqibe ukwenza le ukuba zezona mpompo zibalaseleyo. Kunzima ukuxelela ngemifanekiso kodwa itepu inoyilo olwahlukileyo olubandakanya ukujija kancinci kwispout, okwenza ukuba phantse ibe sisiqwenga sobugcisa. Ulwakhiwo oluqinileyo olunzima. Isiphatho esisetiweyo ngokwenyani siyamangalisa ngokunjalo. Ukuya phambili ngokulula Ukufakwa nokuba kuza neiglavu. Andikwazi ukuphinda ndibuyele ngokwaneleyo!
Ukufakwa kulula ngazo zonke izixhobo kunye nokubonelelwa, izixhobo zibonakala zakhiwe kakuhle kwaye zikumgangatho olungileyo. Ukunikezelwa kwethumbu kunye nezihlanganisi zithathe indawo yompompo wam omdala ngokugqibeleleyo. Amanzi ahamba kakuhle kwaye aphendule kakuhle ngesiphatho esinye kunye nengxolo encinci kwaye akukho siphumo sokutshiza njenge-faucet yam endala. Uyilo luhle kwaye lwenza igumbi lam lokuhlambela elidala likhangeleke litsha kwaye langoku. Olona silelo lodwa aluzukuza nolungelelwaniso lwedreyini kwaye kuya kufuneka ndiyisete ngesandla ngomdlalo wam wakudala. Ngokubanzi, umgangatho olungileyo kunye nokujongeka okuhle kwaye kuya kuhlala iminyaka emininzi, ndiza kuhlaziya kwakhona kwikamva ukuba kukho nawuphi na umcimbi ovelayo.
Le yeyona faucet intle kakhulu endiyibonileyo. Inesitayile esininzi kwaye inzima kakhulu. Yenziwe kakuhle kakhulu kwaye isebenza kakuhle kakhulu. Kwakulula ukufaka. Ndingacebisa oku kuye nakubani na ofuna itompu eqinileyo, yanamhlanje.
Ndithenge le nto ukuze ndihlaziye itompo yam yokuhlambela eyayifudula ingumhla. Bendinexhala ngenqanaba lobunzima ngokufaka itompu entsha. Nangona kunjalo, iphakheji yeza nencwadana yemigaqo yokuba ungayifaka njani. Inxalenye enzima yayikukuphinda ndiyenze kwakhona ngemibhobho yam ekhoyo kwigumbi lokuhlambela. Kodwa kwakungekho kubi kakhulu ukufumanisa. Nangona ixesha lokufaka lingaphezulu kwe-1hr kum njengoko ndingazange ndenze nawuphi na umsebenzi wokulungisa imibhobho ngaphambili. Ndonwabe ngakumbi kuba iza neplat yesiseko njengoko itepu yam yangoku yayinezimbobo ezi-3 ezigrunjelweyo kumphezulu wegranite yam ukuze ndikwazi ukusebenzisa ipleyiti ukugubungela imingxunya emi-2 engafunwanga yile tap. Ukuba neseti yesibini yezandla kuya kuba luncedo kakhulu nangona ndiyifakile ndedwa kodwa oko kwandise inqanaba lobunzima.
Yonke into endiyisebenzisileyo yayiyi-11mm wrentch yokubopha ithumbu kwimpompo endlwini yam (umgca oshushu nobandayo), iscrew driver to bolt the faucet to the granite under and a clamp to change the drain cap
Iphakheji yeza neiglavu ukuze kuthintelwe i-smears zeminwe kuyo yonke kodwa andiyisebenzisanga.
Ukuza kuthi ga ngoku, bendisoloko ndiyisebenzisa kwaye wonke umntu endlwini uthanda indlela itephu entsha ejongeka ngayo. Ngokuqinisekileyo ndiza kuthenga iipompo ezingaphezulu kule venkile njengoko ndijonge ukuphucula ezinye iifompo ezijikeleze indlu.
Ibonakala intle. Kukhulu kakhulu kwigumbi lokuhlambela elincinci. Iimitha zokungcamla.
Ukuphuculwa okuhle kakhulu kwisinki yam yangasese. Umgangatho olungileyo.
WowOW iBack Bathroom faucet enezandla ezahlukileyo ...